Ukuhlangulwa kweCavachon - Inja Uhlangulo Noku Ukwamkelwa
UKUYAICavachonukuhlangula yindawo entle yokufumana ilungu elilandelayo losapho lwakho. Ukuqhutywa ngabantu abazinikeleyo, uninzi lwabo bangamavolontiya, ukuhlangulwa kwenja kuthatha izilwanyana zasekhaya ezishiyiweyo, umongikazi izinja ezigulayo zibuyele empilweni kwaye zincedise ekuhlaleni izinja, njengeeCavachons, ukuze bafumane amakhaya amatsha kunye nosapho oluya kubathanda ngaphandle kwemiqathango.
Malunga neenja zeCavachon
Izinja zeCavachon zezinye zezilwanyana ezixubileyo ezikhula ngokukhawuleza eMelika. Umnqamlezo of aIBichon FrizekunyeUKumkani uCavali Spaniel, ICavachon yenza isilwanyana esinyanisekileyo, esinamandla nesithandekayo.
Inja encinci ikhulisa imifanekiso
Iinyani malunga neePuppy Mills
Imifanekiso yeNja yeGreyhound
IiCavachons zinengubo entle etyebileyo nenobunewunewu engaphalazi. Oku kuyenza ukuba ibe yinja ethandwayo phakathi kwabantu abanengxaki yokugula. Ii-Cavachons zizinja eziphakathi nendawo, zikhula zibe zi-intshi ezili-12-16 ubude kwaye zinobunzima obuphakathi kweephawundi ezili-10 ukuya kwezi-20.
Isidingo esikhulayo sokuhlangulwa kweCavachon
Kukho izizathu ezibini eziphambili zokuba kutheni izinja zeCavachon zingena kwindawo yokuhlala kunye nenkqubo yokuhlangula. Oku kubandakanya ixabiso labo kwiinjana yokusilaUkuthengisa kunye nokushiya ngabanini bezilwanyana abangakwaziyo okanye abangayi kuchitha ixesha elifanelekileyo lokuqeqesha nokulungisa inja.
IiCavachons kunye neePuppy Mills
IiCavachon ngokukhawuleza zithandwa kakhulu. Ngelishwa, loo nto ayikhange ibaleke kwimakethi yokugaya injana. Hlanganisa oko kunye nenyani yokuba okwangoku akukho baninzi abavelisi beCavachon abasebenza, kwaye iziphumo linani elikhuluizinja zokugaya injanaUkukhuliswa ukuze kuhlangatyezwane nemfuno.
Njengokuba uninzi lwezigayo zenjana zivaliwe ngenxa yezilwanyana ezingakhathalelwanga kunye neemeko ezilusizi, izinja ezisindisiweyo kunye neenjana ebezizala ekugqibeleni ziphelela kwinkqubo yokuhlala apho zihlala zisasazeka kwimibutho yohlangulo eyahlukeneyo. Njengokuba kungekho baninzi abalimi abaqinisekisiweyo bale nja, ngokufanayo, akukho mibutho mininzi yokuhlangula iCavachon. Ngokuxhomekeke kwimfuno, iiCavachons zihlala zifumaneka zihlala kwiindawo ezigcinwe kwelinye leentlobo zokuqala.
Nanini na xa umntuucinga ukwamkelaokanye ukuthenga inja, kubaluleke kakhulu ukuphanda zonke iingenelo kunye neengozi ezinxulumene nokuzikhethela. Zonke izinja ziza nemingeni ethile, kwaye iiCavachon azifani. Ngelixa likrelekrele ngokukodwa kwaye lifunda ngokukhawuleza, izinja zeCavachon zifuna ukuzinikela komnini wazo ekubaboneleleniuqeqesho oluqhubekayobade bafunde imida yabo. Kuba izinja zinokuba neenkani ngamanye amaxesha, oku ngamanye amaxesha kunokuba yinkqubo ende nabaniniyo abafuna ukujongana nayo. Iziphumo zizilwanyana zasekhaya eziguqukele kwindawo yokuhlala.
Ukwamkela ukusuka kuHlangulo lweCavachon
Ukuba kunokwenzeka ufumane uhlangulo lwasekhaya oluneCavachon yokwamkelwa, soloko undwendwela uhlangulo kwaye ucele inani lezalathiso. Fowunela zonke izikhombisi kwaye ubuze malunga nempilo yenja yabo kunye namava abo ngoncedo. Kuba uninzi lweeCavachon luhlangulwe kumatshini wokugaya injana, zihlala zifuna ukuncanciswa zibuyele kwimpilo efanelekileyo. Kubalulekile ukuba ukuhlangulwa kungamkeli isilwanyana ngaphambi kokuba inja ilunge ngokwengqondo, ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo.
Imibutho yokuhlangula ayijonganga ngeniso, oko kuthetha ukuba basebenza kwinto abayihlawulisayo malunga nokwamkelwa komntwana. Le mali yentlawulo yokwamkelwa iyahluka phakathi kohlangulo, kwaye inokwahluka ngokuhlangula okufanayo nobudala benja kwaye imeko yezonyango inokuba nefuthe kwiindleko. Ezinye iiarhente zicela umnikelo endaweni yomrhumo wokwamkelwa komntwana nangona umxholo ufana.
Ndingalufumana phi uhlangulo lweCavachon?
Eyona ndawo onokuthi uqale kuyo ukukhangela intshontsho zeCavachon zokwamkelwa kwindawo yakho yokuhlala kwindawo yokuhlala okanye umbutho wentlalontle yezilwanyana. Le mibutho isebenza neearhente zokuhlangula zonke iintlobo, ke ukuba kukho umsebenzi wokuhlangula eCavachon kufutshane nawe, kufuneka bazi ngayo.
Kukho kwakhona Iqela le-Facebook eyenzelwe abanini beCavachon. Ukuba unomdla wokuva kubanini bokwenyani bale nja intle, joyina iqela kwaye uqalise ingxoxo ukuze ufumane umbono ongcono wokuba kunjani ukuba neCavachon. Usenokubuza ukuba ngaba ukhona umntu onokucebisa iarhente yohlangulo. Eminye imithombo yokufumana ukuhlangulwa okunikezelwe kwiiCavachons kubandakanya:
Petfinder -Le yeyona ndawo ibanzi yokufumana izinja zokuhlangula kunye neendawo zokufihla naluphi na uhlobo e-United States. Unokukhangela ngohlobo kunye nendawo.
Ukwamkela-iPet -Ngokufanayo kwisikali sePetfinder, unokukhangela izinja kwilizwe liphela.
Gcina ukhumbula ukuba ezinye zezi ndawo zinokungabikho kuluhlu lwangoku lokuhlangulwa okusebenzayo kweCavachon, kodwa jonga amaxesha ngamaxesha kunye noluhlu kufuneka luqale ukubonakalisa njengemfuno yoku konyuka okunqamlezileyo. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, okwangoku akukho luhlangulo lujolise kwiiCavachons kuphela, kodwa ungakhangela amaqela ohlangulo agxile kakhulu kwizinja ezincinci, okanyeUhlobo lweBichon Frizekwaye Umhlanguli uhlangula Oko kunokubandakanya iiCavachons phakathi kokuthotyelwa kwazo. Xa ukhangela kuluhlu lwesizwe, qiniseka ukuba awukhangeli kuphela 'iCavachon yokwamkelwa komntwana' kodwa kunye 'neBichon Frize' kunye 'neCavalier' njengoko iiCavachons zinokudweliswa njengomxube wolunye lwezi ntlobo.
Yimalini ukufumana i-Cavachon?
Imali iya kwahluka ngendawo yokuhlala kunye nohlangulo, ngakumbi uninzi lwamavolontiya-olusekwe kukunyusa imali yezinja ezifuna ukhathalelo lonyango, izindlu kunye nokunye. Unako, ngokubanzi, ulindele ukuhlawula ngeenxa zonke $ 100 ukuya kwi-150 ngenja endala. Ukuhlangulwa okuninzi kuya kunciphisa umrhumo wezinja ezisixhenxe okanye ezingaphezulu njengoko abantu abadala bengamkelwa ngokukhawuleza njengezinja ezincinci. Iinjana, ukuba zikhona, zinokuxabisa ngaphezulu kuba zifuna inkcitho eyongezelelweyo enjeizitofu eziqhelekileyokwayeUkutshiza / ukushenxa.
Isicwangciso Board Games Ubambiso Ukuhlawula Amatyala Ikrismesi Iincwadi Ne Iifilimu Malunga Toys Ukuncancisa
Iidvd Ne Movie Rentals
ukwenza malunga nabantu abaleleyo
indlela yokuphendula ndikuthanda ngakumbi
luhlobo luni lokutya olutyiwa ngofudo
wenzani ngolwimi lwakho xa uncamisa
I-feng shui isongo sobutyebi be-obsidian esimnyama